Consular Services
1. यात्राअनुमति पत्र (Travel Document)
राहदानी नासिएको, म्याद सकिएको अथवा विशेष कारणबाट नेपाल फर्कनको लागि यात्राअनुमति पत्र आवश्यक परेमा निम्न कागजात सहित यस राजदूतावासमा निवेदन गर्नु पर्नेछ । आवश्यक प्रकृया पूरा गरी राजदूतावासले नेपाल जानको लागि मान्य हुने गरी छोटो अवधिको एक तर्फी यात्राअनुमति पत्र जारी गर्नसक्ने छ ।
-	यात्राअनुमति पत्र आवश्यक पर्नाको कारण र हाल वसोवास गरिरहेको ठेगानासहित निवेदनको साथमा राहदानी फारम एकप्रति ।
-	आफुसंग रहेको राहदानी वा राहदानीको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्र र अन्य कागजात ।
- हालसालै खिचिएको दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।
- यात्राअनुमति पत्रको लागि थाइल्याण्डबाट थाई भाट् १८००। र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० को ड्राफ्ट पठाउनु पर्ने छ । थाइल्याण्ड वाहेक अन्य मुलुकबाट प्राप्त हुन आएकोमा फिर्तीको लागि लाग्ने हुलाक खर्च प्रापक स्वयंले तिर्नु पर्नेछ ।
- यस प्रकारको कार्य समान्यतया २४ घण्टा भित्र सम्पन्न गरिने छ ।
2. कन्सुलर कार्यहरु
राजदूतावासबाट प्रमाणित गर्न पर्ने विभिन्न प्रकारका प्रमाणपत्र, जस्तै, अविवाहित, विवाहित, जन्म दर्ता आदि कागजातहमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ ।
-	नोटरी पब्लिक ऐन नियम अनुसार सक्कल बमोजिम नम्कल प्रमाणित गर्न नमिन्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
-	नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित भएका कागजात पुनः यस नियोगबाट प्रमाणित गरिने छैन ।
-	प्रमाणीकरण वापत एक प्रति कागजको लागि थाई ३०० भाट् दस्तुर लाग्ने छ ।
-	यस प्रकारको कार्य समान्यतया २४ घण्टा भित्र सम्पन्न गरिने छ ।
3. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने
विदेशमा वसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुले नेपाल सरकारको कुनै निकायमा पेश गरिने अख्तियारनामा (अधिकृत वारेसनामा) यस राजदूतावासबाट प्रमाणित गरिनेछ ।
-	अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरण नियोग प्रमुखबाट हुने भएकोले प्रमाणित गर्न राजदूतावासमा आउनु पूर्व अग्रिम समय लिनु पर्ने छ ।
-	अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिन आउंदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं अनिवार्य रु	पमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । हस्ताक्षर तथा ल्याप्चे सहिछाप नियोग प्रमुखको रोहबरमा मात्र गर्नु पर्नेछ ।
-	अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरणको लागि निम्न कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
-	अधिकृत वारेसनामाको कागजात प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएको कानून व्यवसायीद्वारा नेपाली कागजमा रीतपूर्वक तयार गरि कानून व्यवासायीको प्रमाण पत्र नम्वरसमेत उल्लेख भै सहिछाप भएको दुई प्रति हुनु पर्नेछ ।
-	अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिले राजदूतावासको रोहवरमा सहिछाप गर्नु पर्ने छ ।
-	बिक्री वितरण वा नामसारी गर्न लागिएको घर जग्गा वा अन्यसंग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि ।
-	अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नागरिकता र सक्कल राहदानी र अधिकृत वारेसनामा लिनेको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
-	अधिकृत वारेसनामा दिने, लिनेको हालसालै खिचिएको दुई दुई प्रति फोटो ।
-	आवश्यकता अनुसार नाता प्रमाणित, मृत्य दर्ता, हकवाल आदिको कागजात ।
-	अधिकृत वारेसनामामा दुइ जना साक्षीको नाम, ठेगाना र सहिछापसमेत हुनु पर्ने छ।
-	माथि उल्लेखित कार्यको लागि प्रति कागजको लागि राजस्व दस्तुर ३०० भाट् लाग्ने छ ।
-	अग्रिम समय लिई आएको अवस्थामा अधिकृत वारेसनामा सोही दिन प्रमाणित हुने छ ।
- यस राजदूतावासबाट प्रदान भएको सेवाको लागि प्राप्त राजश्व दस्तुरको रसिद उपलव्ध गराईने छ ।
- सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरुलाई बिना झन्झट र विना ढिलासुस्ति सेवा प्रदान गर्न यस राजदूतावास प्रतिवद्ध छ ।